မော်ရင်ဟို ပထမဆုံး ကိုင်တွယ်တဲ့ ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့စပါး . . . ( ၀က်စ်ဟမ်း – စပါး ပွဲ Review ) - SPORTS MYANMAR
မော်ရင်ဟို ပထမဆုံး ကိုင်တွယ်တဲ့ ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့စပါး . . . ( ၀က်စ်ဟမ်း – စပါး ပွဲ Review )
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်း ကတော့ နည်းပြ အပြောင်း အလဲ နဲ့ အတူ ပြန်လည် နိုးထ လာပြီလို့ ပြောနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ အမှတ်ပေး ပြိုင်ပွဲ မှာ ၅ ပွဲ ဆက်တိုက် နိုင်ပွဲ ပျောက်ဆုံး ခဲ့တာ ကြောင့် ပိုချက်တီနို ကို ထုတ်ပယ် ပြီး မော်ရင်ဟို ကို နည်းပြသစ် အဖြစ် ခန့်အပ် ခဲ့မှု ရဲ့ အကျိုးဆက် လို့ ပဲ ဆိုရမလား . . . မော်ရင်ဟို ကတော့ အသင်းသစ် နဲ့ အဖွင့်ပွဲ ကို နိုင်ပွဲ နဲ့ ပိတ်သိမ်း နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
မော်ရင်ဟို ဟာ သူ အသုံးပြု နေကြ ၄-၂-၃-၁ ကစားကွက် နဲ့ စပါး ကို စဖွင့် ခဲ့ ပါတယ် ။ နောက်တန်း မှာ ဘန်ဒေဗီး ၊ ဆန်းချက် ၊ အယ်ဒါ၀ီရယ် နဲ့ အူရီယာ တို့ ကို ထည့်သွင်းခဲ့ ပြီး ကွင်းလယ် မှာတော့ ဟယ်ရီ ၀င့် နဲ့ အဲရစ် ဒိုင်ယာ တို့ ပါ၀င် လာခဲ့ ပါတယ် ။
မော်ရင်ဟို ဟာ အသင်း ကနေ ထွက်ခွာ ဖို့ ရှိနေတဲ့ ဒိန်းမတ် ကွင်းလယ်လူ အဲရစ်ဆင် ကို အရန် စာရင်းမှာ ထားခဲ့ ပြီး ဒယ်လီ အလီ ကို ဆွန် ၊ လူးကပ် မော်ရာ တို့ နဲ့ ကွင်းလယ် တိုက်စစ် အတွက် နေရာပေး ခဲ့ ပါတယ် ။ ဟယ်ရီကိန်း ကတော့ ကပ္ပတိန် လက်ပတ် နဲ့ အတူ တိုက်စစ်မှုး အဖြစ် ပါ၀င် လာခဲ့ ပါတယ် ။
စပါး ဟာ ရလဒ် ဆိုးတွေ ကို အဆုံးသတ် ပြီး နည်းပြသစ် နဲ့ အဖွင့်လှ စေဖို့ အတွက် ပွဲစကတည်းက တိုက်စစ်ဆင် ကစားခဲ့ ပါတယ် ။ ၀က်စ်ဟမ်း က လည်း အဆင့် ၁၆ ကနေ တက်နိုင် ဖို့ အိမ်ကွင်း မှာ အမြင့် ဘောတွေ နဲ့ ထိုးနှက် ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ပါတယ် ။
စပါး ဘက် မှာ အလီ ၊ ဆွန် နဲ့ မော်ရာ တို့ရဲ့ တိုက်စစ် အတွဲ ဟာ ပုံစံ ကောင်း ရခဲ့ပြီး ၀က်စ်ဟမ်း ဘက် ကို ခြိမ်းခြောက် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အထူး သဖြင့် တောင်ကိုရီးယားသားလေး ဆွန်ဟောင်မင် ဟာ ဟမ်းမား နောက်တန်း အတွက် အကြီးမားဆုံးသော အန္တရာယ် ဖြစ်ခဲ့ ပြီး ၃၆ မိနစ် မှာ ဘယ်ခြေ နဲ့ ကန်သွင်းကာ စပါး အတွက် အဖွင့်ဂိုး ကို ရယူပေး ခဲ့ ပါတယ် ။
ပထမ ပိုင်း ၄၃ မိနစ် မှာ လည်း ဆွန် ရဲ့ ဖြတ်တင် ဘော က တဆင့် လူးကပ် မော်ရာ က ပိတ်သွင်းပြီး ဒုတိယ ဂိုး ၊ ဒုတိယ ပိုင်း ၄၉ မိနစ် မှာတော့ ဟယ်ရီကိန်း က အူရီယာ ရဲ့ ဖြတ်တင်ဘော ကို ခေါင်းတိုက် ပြီး တတိယ ဂိုးတွေ ကို သွင်းယူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ နောက် မှာလည်း စပါး တို့ ဂိုးထပ် ရမယ့် အခွင့် အရေးတွေ ရခဲ့ ပြန်ပါတယ် ။ ၀က်စ်ဟမ်း ကတော့ မိနစ် ၆၀ မှ ပထမဆုံး အကြိမ် ဂိုးပေါက် တည့်ခဲ့ ပြီး စပါး ရဲ့ အသာစီး ရမှု ဟာ သိသာ ခဲ့ ပါတယ် ။ စပါး ညာ နောက်ခံလူ အူရီယာ ဟာ လည်း ဒီနေ့ ပွဲမှာ ခြေစွမ်းပြ ခဲ့ပြီး ခံစစ်ရော တိုက်စစ် လိုက်ပါမှုမှာပါ ကောင်းမွန် ခဲ့ ပါတယ် ။
၃ ဂိုး ပြတ် အပြီး မှာတော့ စပါးတို့ ကစားအား ချခဲ့ ရာမှာ ၀က်စ်ဟမ်း ဘက်က ပြန်ဖိ ကစားလာခဲ့ ပါတယ် ။ 73 မိနစ် မှာတော့ အန်တိုနီယို က ၀က်စ်ဟမ်း အတွက် တစ်ဂိုး ပြန်လည်ချေပခဲ့ ပါတယ် ။ အရန်ခုံ မှာ စတင် ခဲ့တဲ့ အဲရစ်ဆင် ကတော့ ရ၅ မိနစ် ကျော် မှာ အယ်လီ အလီ ရဲ့ နေရာ ကို လူစားဝင် ကစား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
၀က်စ်ဟမ်း ဟာ ချေပဂိုး ရအပြီး မှာ ပိုကောင်းလာခဲ့ ပြီး စပါးဘက် ကို ဆက်လက် ဖိ ကစားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီကလန် ရိုက်စ် ရဲ့ ဂိုး တစ်ဂိုး ကို လူကျွံတာ ကြောင့် ငြင်းပယ် ခံရခဲ့ ပေမယ့် ၉၅ မိနစ် မှာ ဒုတိယ ချေဂိုး ကို ပြန်သွင်း နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သိပ် နောက်ကျသွားခဲ့ ပါပြီ ။
ပွဲပြီးဆုံးချိန် မှာတော့ စပါး ဟာ ၅ ပွဲ ဆက် နိုင်ပွဲ ပျောက်မှု ကို အဆုံးသတ် နိုင် ခဲ့ပြီး နည်းပြသစ် ရဲ့ အဖွင့် ပွဲစဉ် ကို နိုင်ပွဲ နဲ့ ပိတ်သိမ်း နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီနိုင်ပွဲ ကြောင့် စပါး ဟာ အခြား ပွဲစဉ်တွေ မကစားမီ မှာ အဆင့်5နေရာကို ယာယီ တက်လှမ်း နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
လာမယ့် ကြားရက် မှာတော့ စပါး ဟာ အရေးပါ တဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် အုပ်စု ပွဲစဉ် ( ၅ ) ကို အိမ်ကွင်းမှာ ကစား ရမှာ ဖြစ်ပြီး အိုလံပီယာကော့စ် ကို အနိုင် ရခဲ့ပါက ၁၆ သင်း အဆင့် ကို တက်ရောက် ဖို့ သေချာသွား မှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။